Cappuccino र प्याकेजिंग को झूटा | Martech Zone
सोमबार, जनवरी 12, 2009 Douglas Karr
गत हप्ता म काम गर्ने बाटोमा म्याकस्किलेट बुरिटोको लागि रोकेको छु। म शायद मलाई कत्ति माया गर्छु कि उनी र क्डोबा ब्रेकफास्ट बुरिटोलाई पोष्ट लेख्न सक्छु, तर म तपाईंलाई जोगाउने छु। जब म थिएँ म्याकडोनाल्ड्स, मेरो जिज्ञासाले मलाई सब भन्दा राम्रो पायो र मैले मेरोमा रोक्नुको सट्टा म्याकफे मोचा अर्डर गरें मनपर्ने कफी पसल.
रंगीन, परिष्कृत संकेतहरू र पृथ्वी टोनको प्याकेजि youले तपाईंको वरिपरि घेरा हाल्छ र आफुलाई युरोपेली क्याफेमा पुगिरहेको जस्तो लाग्छ। तपाईं हुनुहुन्न, यद्यपि। मैले ध्यानपूर्वक हेरें जब काउन्टरको पछाडि व्यक्तिले दायाँ बटनहरू थिच्दछ, सामग्रीहरू हलचल गर्थ्यो, र पेय पदार्थलाई व्हीप्ड क्रीम र चकलेटको थोपाबाट कैद गर्‍यो।
म कारमा पुगेँ, मेरो पहिलो घूंट लिए, र ... ब्लीच। म निश्चित छु कि के भयो, म विश्वास गर्छु कि मेशिन वा केहि चीजसँग खराबी रहेको थियो, तर यसले स्प्रेड क्रीममा छोडेको खराब एक्सप्रेसो शटजस्तो स्वाद चाखायो। म लगभग कुनै पनि कफी पेट गर्न सक्दछु (म भलाईको लागि नौसेनामा थिएँ), तर मैले यसलाई बाहिर फाल्नुपर्‍यो। अवश्य पनि, तिनीहरूको टोलीले थाहा पाउँदैन कि त्यहाँ कुनै समस्या थियो कि भनेर - कुनै पनि कम उनीहरूलाई राम्रो मैदानको मासुलाई थाहा छ। 😉
हामी संग Starbucks मेरो कामबाट तल, त्यसैले कफिको हाउन्ड अप गर्न गाह्रो छ। म विशेष रूपमा उनीहरूको पेपरमिन्ट सिरपलाई मन पराउँछु ... जस्तो कि हाम्रा पुर्खाहरूले कोका-कोलामा कोकेन भएको पत्ता लगाए, मलाई डर छ कि हामीले कुनै दिन स्टारबक्स पेपरमिन्टमा केही अवैध छ भनेर फेला पार्नेछौं।
स्टारबक्ससँग एक धेरै स्पष्ट, स्वच्छ लोगो छ जुन तपाईंको वरिपरिको मान्छेहरूलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, "मसंग यति धेरै पैसा छ कि म burnt burnt केहि जलाइएको बीन्समा खर्च गर्न सक्छु।"(मेरा केहि साथीहरु यसलाई कल गर्दछन् फोरबक्स)। कालो, सांस्कृतिक आइकन जुन स्टारबक्स फेर्ने क्रममा छ। म शायद कम्तिमा लामो लाइनहरु हिट र एक कफी स्ट्यान्ड को साथ एक ग्यास स्टेशन को रूप मा सजिलै स्टारबक्स को लागी पास गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि कप अझै रमाईलो र भिन्न छ।
बाँयामा, सायद, मेरो सबैको मनपर्दो कफी हो। मेरा राम्रा साथीहरू जेसन र क्रिसले कफी शप चलाउँछन्, बीन कप मेरो घरबाट कुनामा।
ह्यामिल्टन, ओन्टारियोको कफि रोस्टरबाट कफि आयात गरिन्छ। प्रत्येक घूंट, यो decaffeinated भने पनि, अझै पनि धेरै चिकनी, धनी र मलाईदार छ। यो फरक वर्णन गर्न गाह्रो छ कि राम्रोसँग भुटेको, जमिन, टेम्पेड र स्टीम्ड बीनले त्यस्तो अविश्वसनीय तरल र मीठो फोम सतह उत्पादन गर्न सक्छ। मा बारिटास इंडियानापोलिसको सर्वश्रेष्ठ कफि पसल ध्यानपूर्वक मापन र समय प्रत्येक शट यसको सुनिश्चित गर्न को लागी अधिकतम छ। प्राय: म तिनीहरूलाई फ्याँकिन्छु र गेडाहरू फ्याँक्दछु जबसम्म उनीहरूले राम्रो शट पाउँदैनन् - कहिलेकाँही आर्द्रताले कहर खेल्न सक्छ।
उनीहरूको स्टारबक्सको जत्तिकै मूल्य छैन र तिनीहरू यति धेरै राम्रो छन् (म्याक कॉफी भन्दा एक्सपोन्शियली उत्तम), तैपनि कप सादा र सेतो छ। केहि विशेष छैन ... भित्र भित्र बाहेक बाहेक। त्यो म खरीद गर्न आएको हो, हो कि छैन? I do पसलले प्रस्ताव गरेको अनुभवलाई पनि भुक्तान गर्नुहोस्! प्रशस्त कोठा, नि: शुल्क वायरलेस, र केहि आरामदायक सिटहरू।
ओह, प्याकेजिंग को झूट! म कल्पना गर्न सक्दिन कि म्याकडोनाल्ड्सले कपमा के पैसा खर्च गर्नु छ कपको बाहिरबाट अझ राम्रो देखाउनको लागि कति पैसा खर्च गरे।
टैग: जेसन खस्छबहु डोमेन spfबहु spf रेकर्डppc एजेंसीपुनरागमनspf लुकअपspf रेकर्डspf रेकर्ड लुकअपटिभी श्रृंखला
जनवरी 12, 2009 11:40 बजे
म खराब कफीसँग पनि व्यवहार गर्न सक्छु, तर मलाई मोटरिन आमा जस्तो लाग्छ। म Starbucks मा ह्याङ्ग आउट गर्छु किनभने यो एक मात्र ठाउँ हो जुन म कामबाट ब्रेकमा जान सक्छु जुन न्यानो छ र जाडोमा आरामदायी सिटहरू छन्। रेखाहरू चुस्न्छन्, कफी राम्रो छैन र बच्चाहरू साना घरपालुवा जनावरहरू जस्तै दौडिएर वातावरण बिग्रँदैछ।
राम्रो, स्वतन्त्र कफी पसलहरू यी भागहरू वरिपरि दुर्लभ छन्। तर, मसँग केही छन् र म तिनीहरूलाई मायालु संरक्षण गर्छु। अचिह्नित कप दीर्घायु रहोस्!
जनवरी 12, 2009 11:47 बजे
के तपाईले जाँच गर्नुभयो ईन्डी कफि पसल? सायद तपाईले सोचे भन्दा नजिक कोही छ!
जनवरी 13, 2009 मा 8: 51 एएम
FYI: ब्रॉड रिपलको स्टारबक्समा, ठूलो (भेन्टी) कफी $2.00 भन्दा माथि छ। बीन कपको अनलाइन मेनु उही $ 1.55 भन्छ। मलाई लाग्छ $4 कपका कथाहरू NYC जस्ता बजारहरूबाट आउँछन्।
तर, महान पोस्ट डग!
जनवरी 13, 2009 मा 11: 03 एएम
मैले पनि, McBlech कफीहरू प्रयास गरें। तपाईंले खराबी अनुभव गर्नुभएन। मलाई थाहा छ किनभने मैले उनीहरूलाई तीनवटा मौका दिएँ। एउटा चिसो कारमेल-स्वाद ल्याटे। एउटा तातो लट्टे। एउटा तातो मोचा। तिनीहरू साँच्चै कति खराब थिए भनेर म छक्क परें। यदि मैले कफी पसलमा खराब कफी प्राप्त गरे भने, म यसलाई फिर्ता दिनेछु र तिनीहरूलाई फेरि प्रयास गर्न भन्दछु।
यदि कसैले कफी-शप कफीलाई आत्मसात गर्न प्रयोग गर्यो भने म धेरै छक्क पर्नेछु। मेरो समाधान: मैले राम्रो गुणस्तर किनेको छु, तर अझै सस्तो एस्प्रेसो मेसिन। चीजले एक वा दुई महिनामा आफैंको लागि भुक्तान गर्यो। अब म आफैं बनाउँछु जसरी म तिनीहरूलाई लागतको एक अंशको लागि चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ कि तिनीहरूले पोशाकमा सुँगुरको बारेमा के भन्छन्।
याएल के मिलर
जनवरी 13, 2009 2:04 बजे
@swoodruff's Five in the Morning को कारणले मैले तिमीलाई भेट्टाएँ।
म कफी पिउने मान्छे हैन तर म चिया पिउने मान्छे हुँ र केहि ठाउँहरू छन् जसको नाममा "चिया" छ तर चियामा दुर्गन्ध आउँछ।
म जिज्ञासु छु, तपाईलाई कफी कपमा लोगो नहुनु मार्केटिङ गल्ती हो जस्तो लाग्दैन?
मानौं कि व्यक्ति X लाई कफीको सख्त आवश्यकता छ, तिनीहरूले कफीको कप समात्ने व्यक्ति Y लाई पास गर्छन्। व्यक्ति X ले व्यक्ति Y ले कफी कहाँ पायो भनेर सोध्छ। हुनसक्छ व्यक्ति X निर्देशन दिनमा नराम्रो छ, हुनसक्छ व्यक्ति Y लाई दिशाको कुनै ज्ञान छैन, हुनसक्छ व्यक्ति Y ले अंग्रेजी राम्रोसँग बोल्दैन, त्यसैले व्यक्ति Y लाई कफी पसल फेला पार्न समस्या भइरहेको छ। यदि खाली कफी कपमा वास्तवमा लोगो भएको भए व्यक्ति Y लाई के खोज्ने भनेर थाहा हुने थियो।
उदाहरणलाई वाइनमा सारौं। मलाई केही वाइनको नाम याद छ तर सबै होइन। जब म वाइन किन्न जान्छु, म परिचित लेबलहरूको लागि दृष्टिकोणमा छु।
मलाई विश्वास छ कि लोगोहरू महत्त्वपूर्ण छन् र तपाईंको लोगोको साथ तपाईंको उत्पादनलाई ब्रान्ड नगर्नु गल्ती हो।
जनवरी 13, 2009 8:30 बजे
द बीन कपको साथी भएको कारण, म पक्का छु कि कपको लागतको कारण तिनीहरूसँग लोगो छैन। तिनीहरू बरु ठूलो सेममा पैसा खर्च गर्न चाहन्छन् र म यसको लागि आभारी छु!
उल्लेखको लागि स्टीवलाई धन्यवाद र आशा छ कि तपाईं चाँडै फर्कनुहुनेछ!
जनवरी 14, 2009 मा 12: 00 एएम
यो बीन कप कहाँ छ? 😉
जनवरी 14, 2009 11:44 बजे
धेरै रोचक पोस्ट। साथै तपाइँको मनपर्ने कफी पसल को एक प्रशंसक हुनुले यसलाई अझ रोचक बनाउँछ। म सहमत छु, मलाई लाग्छ कि लोगोले बीन कपलाई मद्दत गर्नेछ, तर मलाई यो पनि लाग्छ कि यो गर्नको लागि यो लागत लायक छैन। माथिको उदाहरणमा, मलाई लाग्छ कि व्यक्ति Y ले व्यक्ति X लाई सजिलै र छिट्टै थाहा दिनेछ कि उनीहरूले कफीको ठूलो कप कहाँ पाउँछन् र त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर। म यो भन्छु किनभने एउटा कुरा मलाई थाहा छ कि मैले धेरै अवसरहरूमा ठीक त्यस्तै गरेको छु।